भारत पाकिस्तानको बलुचिस्तानलाई दोस्रो बंगलादेश बनाउन चाहन्छ::mirmireonline.com
भारत पाकिस्तानको बलुचिस्तानलाई दोस्रो बंगलादेश बनाउन चाहन्छ
कास्मीरी जनताको स्वतन्त्रताको चाहनालाई अस्वीकार गर्दै पाकिस्तानी आतंकवादीको नाममा दमन गरीरहेको भारतले पाकिस्तानको बलुचिस्तानलाई सन् १९७१ मा पूर्वी पाकिस्तानलाई टुक्रयाएर बंगलादेशमा परिणत गरे जस्तै स्वतन्त्र बलुचिस्तान बनाउने रणनीति अनुसार काम गरीरहेको देखिएको छ ।
भारतले पाकिस्तान विरुद्ध संभव सबै उपाय अपनाएको छ जस्तो कि सिमा क्षेत्रमा प्रवेश र कार्बाही देखि सिमानामा पर्खाल लगाउने मात्र हैन पाकिस्तानमा अदुवा लसुन समेत निर्यातमा अप्रत्यक्ष खालको प्रतिवन्ध लगाएको छ ।
सेप्टेम्बर १८ को उरी हमला पछि भारतले सर्जिकल स्ट्राईकमा दर्जनौं आतकवादी मारेको भन्दै पाकिस्तानले आतकवादीहरुलाई जोगाएको आरोप भारतले लगाएको छ ।
यसको आन्तरीक उदेश्य भनेको कास्मीरमा मुस्लिमहरु रहेको उनीहरुले भारतको तुलनामा पाकिस्तानको समर्थन बढी गरेका छन् र पाकिस्तानले कास्मीरको मानवअधिकारको कुरा उठाईरहेको छ । यसैमा भारतको रिस छ । यद्यपि कास्मीर अन्तराष्ट्रीय विवादीत क्षेत्रको रुपमा परिचित छ । भलै भारतले कास्मीर आफ्नो अभिन्न अंग भएको बताउदै आएको छ ।
सिंगो भारतबाट अलग्गिएको मन नपराएको भारतले सन् १९७१ को युद्धबाट पूर्वी पाकिस्तान अलग्यायो जो हाल बंगलादेशको रुपमा छ । अब भारतको दोस्रो पाईला बलुचिस्तान तर्फ अघि बढेको छ । बलुचिस्तानलाई अलग पार्न सके चीन पाकिस्तानको रणनीतिक सम्बन्ध कमजोर पर्ने, अरबीयन मुलुकसग‘ सोझो सम्पर्कमा पुग्न सकिने , पाकिस्तान कमजोर हुने जस्ता विष्लेषण भारतले गरेको छ ।
बलुचिस्तान टुक्राउने भारतीय स्वार्थ के हो ?
अगष्ट महिनामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बलुचिस्तानका जनताको नाम लिदै पाकिस्तानको राष्ट्रिय स्वतन्त्रतामाथि दखल पर्ने गरी अभिव्यक्ति दिए । उनले बलुच नागरिकको मानवअधिकारको कुरा उठाए । तर कास्मीरमा महिनौदेखिको कफ्र्यु बच्चा समेत भारतीय सुरक्षाफौजको गोलीको शिकार भएको कुरालाई मोदीले किन देख्न सकेका छैनन् ?
उरीमा शसस्त्र समुहको हमला पछि आक्रोसित भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालले पाकिस्तानले कास्मीरको मुद्धा नछोडे या उरी जस्तै अन्य हमला भए बलुचिस्तान गुमाउन सक्ने चेतावनी दिएका थिए ।
जनवरी २५ , २०१६ मा बलुचिस्तानमा विभिन्न पृथकतावादी समुहलाई तालिम दिईरहेको अवस्थामा भारतीय गुप्तचर संस्था रअका सिनियर अफिसर कुलभुषण यादव पक्राउ परेका थिए । उनले आफू भारतीय प्रभाव कायम गर्न बलुचिस्तानमा खटिएको स्वीकार गरेका थिए । अर्को तिर बलुचिस्तान अलग्याउने अभियान चलाईरहेका ब्रहुमदाग बुगीलाई शरण र भारतीय पासपोर्ट दिन सहमत यसै वर्ष हुनुले बलुचिस्तानमा सन् १९७१ दोहोर्उने लामो रणनीति भारतले बुनेको स्पष्ट हुन्छ । पाकिस्तानी विज्ञहरुको दावी अनुसार बलुचिस्तानमा अस्थीरता मच्चाउन भारतले ठूलो लगानी गरीरहेको छ । बलुचिस्तानका गृहमन्त्री सरफराज बुगतीले भारतले बलुचिस्तानमा आतंकवादीहरुलाई तालिम र पैसा दिईरहेको बताएका छन् । यसले आतंकवादीको सुरक्षा पाकिस्तानले मात्र हैन भारतले पनि गरीरहेको छ भन्ने कुरा स्पष्ट छैन र ? यसै गरी पाकिस्तानी सेनाले रअले तालिम दिएर आत्मघाती बम विष्फोटका लागि तयार पारेको तीन जनालाई पक्राउ गरेको थियो । यो भारतद्धारा पाकिस्तानमा आतंकवादको प्रायोजन हो कि हैन ? तर पाकिस्तानले यस्ता विषयलाई अन्तराष्ट्रियकरण गर्न सकेको छैन । जति कास्मीरलाई भारतले गरीरहेको छ ।
बलुचिस्तान पाकिस्तानको अरेबियन सागरमा जोड्ने क्षेत्र पनि हो । यसले ईरान र अफ्गानिसग‘को सिमा पनि जोड्दछ । दुर्भाग्य यो छ कि अथाह प्राकृतिक स्रोतका बाबजुद पनि बिकासमा पछि परेको छ बलुचिस्तान । तामा सहित अन्य खनिज पदार्थहरुको ठूलो स्रोत रहेको बलुचिस्तान अन्तराष्ट्रिय शक्तिहरुको स्वार्थ जोडिएको छ । भारतीय पैसा नखनिएको भए मोदी जिन्दावाद र नवाज मुर्दावादको नारा केही समुहले लगाउने थिएनन् ।
अर्को तिर बलुचि पृथकतावादीहरु मार्फत चीन पाकिस्तानबीच २०१५ मा भएको करीडोरको पनि विरोधमा खडा गरेर भारतले आफ्नो रणनीतिक रक्षा चाहेको छ । वान वेल्ट वान रोडमा सहभागी हुनबाट नेपाललाई समेत बञ्चित गराएको भारतले पाकिस्तानको ४६ बिलियन डलरको यो वृहत प्रोजेक्टेले देशमा ठूलो मात्रामा रोजगारी सृजना हुने र आर्थिक वृद्धि हुने लक्ष्य सहित सहमति गरेको थियो । यसले पाकिस्तानका विभिन्न प्रँन्तहरुको बिकासमा ठूलो मद्धत पुर्याउने छ । यस करीडोरले बलुचिस्तानलाई पनि प्रभाव पार्ने छ ।
भारतले के बुझ्नु पर्दछ भने कास्मीरलाई उसले जत्तिको अभिन्न अंग ठानेको छ त्यो भन्दा बढी बलुचिस्तान पाकिस्तानको मुटु हो ।
भारतले शरण दिएको बलुच निर्वासीत बुगती
पाकिस्तानको पोजिसन के छ ?
विश्वको ३६ औं ठूलो मुलुक पाकिस्तान एशिया तथा दक्षिण एशियाकै रणनीतिक महत्वको मुलुक हो । तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ कि यसमा अमेरीकी स्वार्थ र प्रभाव अलग किसिमको छ । चीनको अलग्गै र भारतको अलग्गै । जो सुकै शक्ति राष्ट्रलाई पाकिस्तानको रणनीतिक साझेदारी या त प्रभाव चाहिएको छ ।
२० करोड भन्दा बढी जनसंख्या भएको पाकिस्तान जनसंख्याका दृष्टिले विश्वको छैटो स्थानमा पर्दछ । यसले १०४६ किलोमिटर अरेबियन सागरको तटीय ईलाका र गल्फ अफ ओमनको एरिया सर्भ गर्दछ । पूर्वी सिमानामा भारत, पश्चिममा अफ्गानिस्तान, सुदुर उत्तरमा चीन, दक्षिण पश्चिममा ईरान सम्म यसको सिमा जोडिएको छ । यसको मेरीटाईम शेयर ओमनसग‘ छ । साथै ताजिकिस्तानसग पनि नजिक छ अफ्गानिस्तानसगको साघुर वाखान करीडोरले मात्रै केही अलग गरेको छ । सन् १९४७ मा अग्रेजबाट भारत मुक्त भए लगत्तै अलि जिन्नाले पाकिस्तान स्वतन्त्र बनाएका थिए ।
पाकिस्तानी सेना प्रमुख बलुचिस्तानमा सैनिक तयारीको बारेमा जानकारी दिदै ।
मुस्लिम राष्ट्रमध्य जनसंख्यामा पछि भए पनि आणविक शक्तिका हिशाबले पाकिस्तान सबै भन्दा शक्तिशाली राष्ट्र हो ।
पाकिस्तानको निम्न लिखित ८ वटा संघीय प्रादेशिक प्रशासनिक भौगोलिक प्रान्तहरु छन् ।आन्तरीक राजनीतिक तनाव र वैदेशिक शक्तिको दवावका कारण पाकिस्तानको राजनीतिक तथा आर्थिक अस्थीरता बढेको छ । यसले राष्ट्रिय मुद्धामा समष्टिगत दृष्टिकोण दिन सकेको छैन ।
त्यस्तै अमेरीकाले पनि बलुचिस्तानका आतंकवादीहरुलाई स्पोन्सर गरेको कुरा यस अघि सार्वजनिक भईसकेको छ ।अब भारतसग‘ चौथो युद्ध भए वा बलुचिस्तान जस्तो क्षेत्रमा भारतीय स्पोन्सरमा बिद्रोह भएमा त्यसलाई पाकिस्तानले थेग्न सक्छ कि सक्दैन ? पाकिस्तानी तयारी र दृष्टिकोण के छ ? यो निकै महत्वपूर्ण प्रश्न छ । बलुचिस्तान विश्व व्यापारको लागि संभावित पूर्व पश्चिम गर्ने छोटो मार्ग र सुमुन्द्री मार्ग भएकाले पनि मुख्य गरी भारत यसलाई अलग्याउन चाहन्छ । अमेरीका चीनको व्यापारीक र समुन्द्री मार्ग कमजोर बनाउन बलुचिस्तान नियन्त्रणमा चाहन्छ ।तर पाकिस्तानले बलुचिस्तानमा विदेशी शक्तिद्धारा आयातित विद्रोही र स्थानीय जनताको मुद्धालाई छुट्याएर रणनीतिक दृष्टिले काम गर्नु पर्ने विज्ञहरुले औल्याएका छन् ।
यसरी बंगलादेश टुक्रयाएको थियो भारतले ?
हालको बंगलादेश पहिलाको पूर्वी पाकिस्तान थियो । त्यस भित्र आफ्नै प्रकारको राजनीतिक माग र आन्दोलनहरु थिए । भारतले हजारौं जासुसहरु मार्फत पूर्वी पाकिस्तानको पृथकतावादी समुहलाई तालिम र हतियार मात्र प्रदान गरेन । प्रशासनिक कर्मचारीहरुको ठूलो संख्या तलव दिएर सूचना दिने बनाएको थियो ।
अन्तिम तिर गएर पाकिस्तान वायुसेनाको बिमानलाई हवाई मार्ग रोकेर पूर्वी बंगलादेशमा विद्रोहीमाथिको आक्रमणलाई कमजोर बनाईदियो भने कोलम्बोको रुटबाट जाने पाकिस्तानी सैनिक विमानलाई पनि श्रीलकामाथि दवाव दिएर तेल भर्न नदिएर समस्यामा पार्यो । यसरी आन्तरीक राजनीतिमा ध्यान नपुर्याउदा पाकिस्तानले भारतकै कारण पूर्वी पाकिस्तान गुमायो । र अन्तिममा दशौं हजार भारतीय फौज ढाकामा पुगेर बंगलादेश छुट्याएको थियो ।
तर यी सबै प्रोसेस अन्तिममा भारतले लागि निकै हानिकारक हुने छ । उसले जति अस्थीरता छिमेकी मुलुकहरुमा खास गरी नेपाल र पाकिस्तानमा मच्चाईरहेको छ । भुटानलाई नियन्त्रणमा लिएको छ र नेपाललाई सोही प्रकृयामा लैजाने काम गरीरहेको छ । यसले भविष्यमा भारतलाई ठूलो नोक्सानी हुने छ ।
राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषदबाट बाहिरियो अमेरीका, परिषद पाखण्डी निकाय–हेली